१ करोडमा बनेको सुर्खेतको खुल्ला कवर्ड हल प्रयोगमैं नआएर जिर्ण ! (हेर्नुहोस भिडियो ) – HostKhabar ::
१ करोडमा बनेको सुर्खेतको खुल्ला कवर्ड हल प्रयोगमैं नआएर जिर्ण ! (हेर्नुहोस भिडियो )
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेको कवर्ड हलको संरचना उपयुक्त नहुदाँ खेलाडीलाई समस्या भएको छ ।
संघिय संरचनामा गई प्रदेश राजधानी समेत तोकिएको सुर्खेतमा एउटा पनि गतिलो रंगशाला नहुँदा खेल क्षेत्र सँधै पिछडिएको आम गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा पारेको भनिएता पनि अहिले सम्म राजधानीमा कामचलाउ सम्म पनि रंगशाला नबन्दा खेल क्षेत्रको बिजोग भएको हो ।
चुली युवा क्वलका कोच मोतिराम रम्तेलले रंगशाला तथा कवर्ड हलको अभावमा खेल क्षेत्र पिछडिएको बताए । आईतबार होस्ट खवरसँग कुराकानी गर्दै उनले कर्णालीको खेल क्षेत्रले भोग्नु परेको दुखेसो पोखेका हुन् । सरकारकारले लाखौँ खर्च गरेर कवर्ड हल बनाएको तर खेल खेलाउनका लागी उपयुक्त नभएको उनको भनाई छ । निमार्ण भए देखि अहिले सम्म कुनै पनि खेल नभएको उनले बताए ।
खेलकुदका लागी उपयुक्त भौतिक संरचना नहुदा खेलाडीको हात खुट्टा भाँच्चीने गरेको उनले दुख सुनाए । कवर्डहल सञ्चालनमा नआउनुको कारण सम्बन्धी निकाय कमजोर भएको उनको भनाई छ । सम्बन्धित निकाय मौन बन्दा युवा युवति बस्ने स्थल र सौचालयको रुपमा प्रयोग भएको उनले बताए । त्यस्तै अर्का कोच दिपक बहादुर शाहीले पनि अहिले कवर्ड हल प्रयोगमा ल्याउने अवस्था नभएको बताएका छन् ।
सामान्य खेलका लागी मात्र प्रयोग भएको तर खेलाडकिो लागी प्रयोग नै नभएको उनको भनाई छ । खेलाडी ज्वाला चँन्द र वसन्ती साउँदले पनि आफुहरुलाई खेल खेल्नका लागी यो कर्बड हल उपयुक्त स्थान नभएको बताईन् । बनेको भौतिक संरचना पनि फोहोर र प्रयोग बिहिन हुदा आफुहरुलाई खेल सिक्नको लागी समस्या भएको उनीहको भनाई छ ।
जिल्ला खेलकुद बिकास समितिका प्रमुख राम बहादुर वलीले पनि सुर्खेतमा रहेको कवर्ड हल प्रयोग बिहिन बनेको बताउँछन् । संघिय सरकारको बजेट बाट झण्डै ६ बर्ष पहिला बनेको कवर्ड हल अहिले सम्म कुनै खेलकुद कार्यमा प्रयोग नभएको उनको भनाई छ । यसको लागत झण्डै ९३ लाखमा बनेको तर कर्णालीका खेलाडीहरुका लागी भने प्रयोगमैं नआएको उनले बताए । यो कवर्ड हल खुल्ला भएकाले पानी पर्दा भिज्ने र घाम लाग्दा गर्मि हुने हुनले प्रयोगमा नआएको उनले जानकारी दिए ।
हल खुल्ला भएकाले जोकोहि जान नमान्ने र त्याहाँ प्रयोगका लागी राखिएका सामग्री पनि चोरी हुने गरेको उनको भनाई छ । यस हलको रेखदेख गर्न कोहि नभएकाले पनि पछिल्लो समयम जिर्ण बन्दै गएको उनले बताए । प्रदेश र संघिय सरकारसँग घेरबारको लागी बारम्बार बजेटको माग गर्दा पनि सुनुवाई नभएको उनले ताएका छन् ।
जब सरकारको ध्यान जादैन तब सम्म यो कवर्ड हल को अवस्था नाजुक बन्दै जाने उनको बुझाई छ । सुर्खेत जस्तो राजधानीमा पनि कबर्ड हलको अवस्था यस्तो छ भने अन्य जिल्लामा के होला खेलकुदको अवस्था? यसको जवाफ खेलाडीले र आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।